About Us - Shanghai diovina Hotel Manome Co., Ltd
S hanghai manadio Textile Limited, toy ny mpitarika sy ny trano fandraisam-bahiny matihanina mpanamboatra lamba any Atsinanana Shina, dia mifantoka ao amin'io faritra io mihoatra ny 15 taona. Ny vokatra lehibe ao anatin'izany ny: lamba firakotra trano fandraisam-bahiny, trano fandraisam-bahiny towels, trano fandraisam-bahiny misy ao, F & B linens. Tsy manome vahaolana feno ho an'ny trano fandraisam-bahiny lamba vondrona, Airlines, Cruise sambo, hopitaly.
T hrough ny mpiasa maneran-tany sy ny mpaninjara, ankehitriny dia hanome lamba ho an'ny trano fandraisam-bahiny maro ny vondrona malaza izao tontolo izao, toy ny InterContinental, Marriott, Hilton, Starwood, Hyatt, Shangri-la sns isika fanondranana ny mihoatra ny 25 firenena.
O Ora varotra sy ny fitaovana fanompoana birao dia hita ao amin'ny tanàna maoderina Shinoa - Shanghai, sy ny fanamboarana base in China Central faritany. Tsy manohana antsika vidiny ambany sy ambony fahombiazan'ny asa fanompoana.
M akora noho ny 15 taona Hotel famatsian traikefa, 10+ taona orinasa matihanina mandray vahiny damba fandidiana, izay hanome anao ny tsara indrindra fanompoana varotra, milamina tsara sy ny fifaninanana vidiny. Tsy andrintsika ny fandreseny-fandreseny manana fiaraha-miasa amin'ny mpizara maneran-tany, mpiasa, trano fandraisam-bahiny vondrona!